Miresaha Zavatra Mahaliana sy Mahasoa | Mamaky Teny & Mampianatra
Miresaha Zavatra Mahaliana sy Mahasoa
1 Korintianina 9:19-23
AHOANA IZANY? Miresaha hevitra manaitra ny sain’ny olona, dia ho faly izy hoe lasa nahalala zavatra mahaliana sady mahasoa.
Fantaro aloha hoe inona no efa hainy. Raha foto-kevitra efa hainy ilay horesahinao, dia miresaha zava-baovao momba an’ilay izy, fa aza mamerina fotsiny an’izay efa fantany.
Azonao resahina ihany izay zavatra efa hainy, fa aza andaniana fotoana be. Ilay hevitra mbola tsy fantany no tena resaho.
Mitadiava zavatra mahaliana horesahina. Azo atao, ohatra, ny miresaka vaovao farany na zavatra tsy fahenon’ny olona, rehefa hanazava hevi-dehibe. Diniho tsara anefa aloha ilay izy, sao dia tsy mifandray amin’ilay hevitra horesahinao akory.
Eritrereto hoe: ‘Nahoana ity no ilaina? Ahoana no hanazavako azy? Taiza ilay izy no nitranga?’ Na mametraha fanontaniana hafa. Hanampy anao handinika tsara izany. Azonao ampiasaina koa ireo fanontaniana ireo rehefa mandaha-teny ianao, dia hahaliana ny olona ny lahateninao.
Porofoy hoe mahasoa ilay hevitra resahinao. Miresaha zavatra fanaon’ny olona, na toe-tsaina ananany, na zavatra iainany, dia hazavao hoe misy torohevitra momba an’ilay izy ao amin’ny Baiboly.
Miezaha Hahay Hamaky Teny sy Hampianatra: Miresaha Zavatra Mahaliana sy Mahasoa